Garoomada diyaaradaha Soomaaliya oo la qiimeynayo si loo hormariyo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Garoomada diyaaradaha Soomaaliya oo la qiimeynayo si loo hormariyo
A warsame 6 November 2014
Mareeg.com: Shir looga hadlayay dayactirka iyo horumarinta garoomada diyaaradaha Soomaaliya oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Soomaalya, ayna maaleglisay hya’ada UNSOA oo lagu soo gebagebeeyey magaalada Nairobi ee dalka Kenya, ayaa waxaa ka soo baxay qodob dhowr ah.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Saciid Jaamac Cali Qoorsheel oo soo xiray shirka ayaa ka soo qeyb galayaasha iyo hay’ada UNSOA uga mahad celiyay doodihii ay ka sheegeen sidii loo horumarin lahaa loona dayac tiri lahaa garoomada diyaaradaha ee ku yaalo dalka Soomaaliya.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumada Soomaaliya, Saciid Jaamac Cali Qoorsheel ayaa sheegay in la sameeyay gudi labada dhinac ah oo ka kooban 11 xubnood, kaasi oo qiimeeyn ku soo sameeyo garoomada diyaaradaha ee dalka Soomaaliya.
Wasiir Qoorsheel ayaa sheegay in gudigasi ay 12-ka bishan tagi doonaan magaalada Muqdisho, islamarkaana ay qiimeyn doonaan baahiyaha ka jira garoomada diyaaraha ee dalkena, kana soo talo bixin doonaan qaababka loo horumarin karo iyo sida loo kala hor marinayo garoomadasi.
Wuxuu wasiirku intaasi ku daray in sidoo kale la sameeyay gudi ka kooban 4 xubnood oo labada dhinac ah, kuwaasoo todobaadkan tegi doono magaalada Muqdisho si ay uga soo talo bixiyaan sidii nalal suura galiya in habeenkii ay diyaaradaha ku soo degaan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde loogu sameeyn lahaa.
The Draghi Put on Trial
Akhri: Dil lagu xukumay nin arday ku dilay masjid ku yaalla Muqdisho